Wednesday July 17, 2013 TWITTER FACEBOOK PRINT THIS PAGE SEND TO YOUR FRIEND
Sanadka kadib markii uu xukunka la wareegay Siyaad Barre uuna arkay in Prof-ka fikaradaha uu Wato ay yihiin kuwo ka hor imaanaya mabadidisa uu watay, ayuu ku xareyay xalane si wagtiga halkaas looga dilo, wuxuu ku xareysnaa. halakaas, 3 sanno.
Prof.ka wala dalacsiyey waxaa loo bedeley Jeneva.UNka Jeneve waxuu aad difacey Xuquqaha Umadaha dulmiyey ka mid ahayeyn Plastin. Kadib waxaa loo soo warejey Safarada Somaliyeed ee Fransiska Magaalada Paris.
Intuu uu halkaa joogay ayay waxay is qabteen Asagia iyo dawladi Marakaas ka jirtey Somalia, waxeyna isku qabtey Cadalad darada iyo Dulmiga lagu xaayey Umada Somaliyed Qeyb ka mid ah. Dulmigaaso Mid ahaan Boob dhul, ku hadgudun Xoqul insaanka , iyo Barakicin lagu xayey Umada degta Gobolada Koonfureed.
Wuxuuna si cad oo gabasha leheen ugu sheegey Dawladi Siyaad Bare in Joojiyaan dhibka ya ku xayeen Prof.ka Umadiisa. Waayo waxuu usoo dagaalmeu horayadii Jabuuti, South Africa, Zimbawe, Namibia , Angola i.w.l. waxuu arkey Prof.Omar in Umada asaga u ka soojeedo Lagu xaayo Gomeysi Qabiil ah, taasoo mabadisa ka soo horjedey.
Sanadkii 1987-kii ayuu abaabulay shirweyne Umada koonfurta degto Aqoonyabannadooda. isugu yimaadaan wuxuuna ka dhacey Abu Dabia, waxaana lagu aasaasay Ururkii SDM matal-ayay dhammaan Qowmiyadda konfurta fadhigiisa loo doortay Magaalada Jeddah.
Asagoo ku howlan Badbada Ummadiisa, ayow dhintey 21/11/1911. Dilkisna waxaa danbeyey kuwii didana Ummada Konfurta degto in la badbadiyo. Xiilgan la jogana Qowmiyadda Koonfurat waxay u baahan tahay hogaamiye xoogooda iyo maskaxdooda meel isugu keena si ay danahooda u qabsadaan.
VIDEO:-XILDHIBAAN IDIRIS IYO XILDHINAAN MOHAMED OSMAN ISACK FANAX AYAA...
Prof.Omar Foundation for human right and Justices...